I-RAD140 (Testolone) i powder (1182367-47-0) hplc = 98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / I-SARMS / RAD140 (Testolone) powder
5.00 koku 5 ngokusekelwe ku 2 izilinganiso ikhasimende
SKU: 1182367-47-0. Isigaba: I-SARMS
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-RAD140 (Testolone) powder (1182367-47-0), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi elandelwayo.
I-RAD140 (Testolone) ividiyo ye-powder
I-RAD140 (i-Testolone) ewutshisayo Izinhlamvu eziyisisekelo
Igama: I-RAD140 (Testolone) powder
Formula Yamamolekhula: C20H16CIN5O2
Umbala: i-powder emhlophe i-white
Ukusetshenziswa kwe-RAD140 (Testolone) ewusizo emjikelezweni we-steroids
Amanothi amaRAD140 (Testolone) ama-powder amancane
I-RAD140 powder ibizwa nangokuthi i-Testolone powder (i-CAS 1182367-47-0).
Ukusetshenziswa okukhulu kwe-RAD140 (Testolone)
Izinga eliphakanyisiwe le-RAD140 / Testolone lihluka kusuka ku-20-30mgs ngosuku, kanti ubude bomjikelezo obuhle yi-12-14weeks.
Isexwayiso ku-Raw Testolone powder
Esinye sezici ezikhangayo kunazo zonke ze-RAD140, nawo wonke ama-SARMS ngokujwayelekile, ukungabikho kwemiphumela emibi, okwenza ezinye zezidakamizwa ezithuthukisayo ezisebenzayo (PED) kulezi zinsuku.
I-RAD140 powder emifushane
Ngokusobala, i-testolone ingabuyisa izinzuzo ezingavamile kumdlali ngaphandle kwezindleko zemiphumela emibi ebonayo nge-anabolic androgenic steroids. Ngokuvamile, i-testolone izokwandisa kakhulu emasimini kanye namandla. Ngenxa yalokho, i-RAD140 izoba ngaphezu kokunye kunoma yiluphi uhlobo lomjikelezo, lapho lunikeza khona zonke lezi zimfanelo ngaphandle kwemiphumela emibi eyengeziwe.
Amaqanda e-Testolone (CAS 1182367-47-0)
Ukumaketha okukhulu kwe-RAD140 powder
Indlela yokuthenga i-RAD140 powder (i-CAS 1182367-47-0); Thenga i-Testolone powder kusuka ku-AASraw
RAD140 Ukupheka Powder:
Thenga i-RAD140 powder ku-inthanethi: Amaqiniso we-8 kufanele wazi !!!
Thenga i-RAD140 (Testolone) powder: Iyini i-RAD140 esetshenziselwe?
Thenga i-Testolone powder yokwakha umzimba: imiphumela ye-RAD140 kufanele wazi!